Ụbọchị My Pet » 6 Ụdị Women Men na-achọ
6 Ụdị Women Men na-achọ
emelitere ikpeazụ: Sep. 26 2020 | 3 min agụ
Olee ụdị ndị inyom na-ndị ikom na-achọ? Nke a bụ ajụjụ na otutu azịza. Ụfọdụ ụmụ okorobịa na-anya maka mmekọahụ na bombs zuru okè ozu na a Diva àgwà, mgbe ndị ọzọ a igwuri egwu nwanyị bụ ihe mara mma. Ụfọdụ ụmụ okorobịa na-mkpa a nwaanyị onye na-elekọta ha, dị nnọọ ka nne ha na-eji. E nwekwara ndị nke a bit nke omimi ma ọ bụ a na-agafeghị oke echiche nke onwe dị nnọọ na-adọrọ adọrọ. Enweghị eme ka ike gwụ niile ohere, ebe a bụ isii ụdị ndị inyom ọtụtụ ndị ikom na-achọ:
The mmekọahụ bọmbụ
Nke a bụ nke mbụ ụdị nwanyị nke na-abịa ka onye ọ bụla n'uche mgbe na-agbalị chepụta nke ụdị ndị inyom yikarịrị na-adọta ndị mmadụ n'oge. Ọ bụ eziokwu: a mmekọahụ bọmbụ ga-eme ka 99% ndị ikom-atụgharị isi ha mgbe ọ na-ejegharị n'okporo ámá. Ọ bụ nnọọ iwu nke mma! Otú ọ dị, ị nwere ike obi ike: ndị a bụ ndị bụghị nanị ndị inyom ndị ikom na-achọ! N'eziokwu, mgbe na-achọ ruo ogologo okwu mmekọrịta, ụfọdụ ụmụ okorobịa ga-ọbụna zere mmekọahụ bombs.
The ụmụaka nwaanyị
Ị nụrụ ya ọtụtụ ugboro: ndị ikom mgbe eto eto kpamkpam. Ha na-akpọ ha na ụmụaka na video egwuregwu ndụ ha nile. Ezie na nke a abụghị eziokwu banyere bụla otu nwoke na ị izute, i kwesịrị ịma na e nwere ndị na-eche dọtara ụmụaka inyom, ha na-enwe nchekwube àgwà na ndụ, ha igwuri egwu ọnụ ọchị na lightens ụlọ. Ò nwetụla mgbe ị na-eche ihe mere okenye ụmụ okorobịa na-dọọrọ mmasị a otutu ụmụ agbọghọ? Nke a nwere ike ịbụ na ihe mere!
The nne ụdị
Ọ na-kwuru na ndị inyom na-achọ nna ha ọnụ ọgụgụ, na ndị ikom maka nne ha oyiri. Gịnị mere? The ọkà n'akparamàgwà mmadụ ga-akọwa unu nile banyere ndị ikom / nwanyị prototype anyị niile ịzụlite mgbe na-eto eto. E wezụga nke a, e nwere ndị ikom si n'ebe ndị, enweghị ndidi misogynists, dị ka na-ekere òkè ndụ ha otu nwanyị na-elekọta ha isi mkpa, nri na ihicha ụlọ. Makwaara dị ka "nwanyị", nne-dị ka ụdị nke nwanyị bụ ọtụtụ ndị ezigbo.
The jụụ PAL
Maara: bụ ndị ọ bụghị mgbe niile mgbe gị na ọtụtụ nwanyị na sexiest n'akụkụ! E nwere ndị na-enwe ekele maka ezi PAL-aghọta ha njakịrị, udeme ha mmasị dị ka egwuregwu Fans, na maara otú aka a Ịgba Cha Cha console. Bụ nwaanyị na kichin? Ọ bụchaghị! N'ihi na ndị a na ụmụ okorobịa, ezigbo nwaanyị na-akwado otu football otu, na bụ ezigbo mmegide na ha mmasị ụgbọ ala ọduọ video egwuregwu. Otú ọ dị, ihe nwere ike ịgbanwe na ime, ebe unu nwere ike iji dobe jụụ omume ma na-gị kasị nwanyị aghụghọ.
The omimi nwaanyị
Women amasị gburugburu onwe ha site na-AURA nke omimi, dịkarịa ala na mmalite. Ọtụtụ ndị ada maka ya, ma otu ugboro ihe omimi na-arahụ, ihe wee ghọọ na-agwụ ike. Ya mere, kpachara anya! Ọ bụrụ na gị Ihọd na ya dọọrọ mmasị gị omimi n'akụkụ ke akpa itie, i nwere ike na-achọ ụfọdụ n'ime ya niile, tinyere. Kpachara nri gị nke ịbụ nwanyi, na-agbalị ịbụ na-ejighị n'aka, kama ọ bụ naanị site n'oge ruo n'oge. A ruo ogologo oge ngụkọta omimi nwere ike ime ka gị na nwoke na-eche na ị na-ezo ihe site n'aka ya, na ọ dịghị onye nwere mmasị na.
The onwe nwaanyị
Men adịghị na-emekarị ka clingy ịdabere inyom na-apụghị ime otu nditọete site na ha. Ọtụtụ ụmụ okorobịa ga-adị ọzọ dọtara otu nọọrọ onwe ha nwaanyị onye nwere ike ịgbanwe a bọlbụ onwe ya ma ọ dị mkpa. Otú ọ dị, a ga-akpachara anya ka overdo gị onwe-eme, dị ka onye gị na ike iche unu adịghị mkpa ya ná ndụ gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa na-ebu na arọ akpa na gị onwe gị, ị pụrụ ịtụle arịọ maka enyemaka ya site n'oge ruo n'oge.
Olee otú iji dajụọ ndị a Gbasara
Olee otú Kiss na 5 Easy Nzọụkwụ
Ise ụzọ na-Back gị Ex.